कतिमा कारोबार हुँदैछ सुनको मूल्य ? - Everest Dainik - News from Nepal
कतिमा कारोबार हुँदैछ सुनको मूल्य ?
काठमाडौं, असार २४ । साताको तेस्रो दिन मंगलबार पनि बजारमा सुनचाँदीको भाऊ यथावत नै रहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस आज सुनचाँदीको बजार भाऊ कति छ ?
यस्तै, सोमबार तेजावी सुनको मूल्य ६४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आजपनि फेरि प्रतितोला सुनको मूल्य ६४ हजार २ सय रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस बजारमा आज तोलामा कतिले बढ्यो सुनचाँदीको भाऊ ?